Ny masika miaro amin'ny fiarovana Ny saron-tavy fiarovana dia saron-tava fiarovana isan'andro sy saron-tava fiarovana ara-pitsaboana Saron-tava fiarovana isan'andro Ny vatan'ny saron-tava fiarovana isan'andro dia vita amin'ny fitaovana misy menaka. Ny saron-tava fiarovana isan'andro dia mizara ho mason-tavy vovoka sy saron-koditra manohitra ny tsimokaretina. Bika masaka manana protec ...
KN95 Masks Amin'izao fotoana izao, ny fanaovana saron-tava fitsaboana dia heverina ho iray amin'ireo fomba mahomby hanakanana ny fihanaky ny COVID-19. Na izany aza, maro ny mason-tava. Karazan-tava isan-karazany dia afaka manakana ny COVID-19 mahomby toy ny KN95. Raha ny mpitsabo sy olona olona miditra matetika ...
Ampiasao Mask N95
Mampiasa indray ny N95 Mask Coronavirus dia miparitaka amin'ny olona iray, rehefa misy olona mifandray amin'ny tsiambaratelo olona mararin'ny olona voan'ny aretina. Ny trangan'ny otrikaretina dia misy fiantraikany amin'ny lalan'ny fifindrana mivantana. Ny fisoloana saron-tava dia afaka misakana anao tsy hifoka ny tsimok'aretina ao anaty onja mivantana.Remember w ...